“အတွေးစလေးတွေ”: ဗယ်-လင်မှလည်း မတိုင်းချင် . . .
Posted by Han Kyi at 8:59:00 pm
ဟမ် ဘယ့်နှာကြီးလည်း LOL ရယ်လို့ ???
ဒီနှစ် ဗာလင်တိုင်း မကျင်းပချင်ကြပါနဲ့
သချာင်္နည်းအရ ချစ်သူများ အခြေအနေမကောင်းပါ
Anne,,(one of ur ပရိသတ်)ဟဟ
ဒိုးကန်တို့လဲ ဗယ်လင်တော့သမီးရည်းစားဘ၀ကတိုင်းခဲ့ဖူးပါရဲ့ဆရာရေ ခုတော့လဲ အနီဗာစလီဖြစ်တွားဘာဘီး)))
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဟာ
မဟေသီက ဆဲ ...
ဟီးး ဦးဟန်ကြည်ကဗျာဖတ်ပြီး ဖျက်လိုက်၏။ စိတ်မဆိုးကြေး :))
ဆရာ့ကဗျာလေးသဘောကျတယ်...။ ဟုတ်တယ်ခုခေတ်လူငယ်တွေတော်တော်များမျာ ဗယ်လင်တိုင်းတွေသိကြတယ် ဖေဖ၀ါရီ13 ဘာနေ့လဲမသိကြဘူး ဆိုးထှာ...။
-ကြံကြံဖန်ဖန် ကိုဆိုဆီရယ် ဘူကျရတယ်လို့ စဉ်းစားမိပေါင်ဗျာ...ဗယ်လင်တိုင်းကျမယ့် ကလေးတွေတော့ ဒီအကြောင်းသာသိရင် ရင်နာလိုက်ရှာမယ့် ဖြစ်ခြင်းး)
-မမေဓာဝီလုပ်မှဖြင့် ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် ပန်းဂေါ်ဖီနဲ့ကို ငြားတော့တာပဲ...
“ ပန်းဂေါ်ဖီ ”
ဗယ်လင်တိုင်းမှာ စိတ်ဓာတ်ကျ ဟဲ ဟဲး)
ဆရာဟန်တို့ များ ရင်သိမ့်တုန် ၀တ်ထုရေးဆြာမတွေ နဲ့များ တခြားစီပဲ..။ ဟွန်းး။ :P
ဘယ် လင် မှ လည်း မ တိုင်း ချင်
လို့ ဖတ်မိသွားလို့ LOL loud of Laugh ဖြစ်သွားတာပါဆရာဟန်
အမှန်ပဲ ဒီနှစ်ဗယ်လင်တိုင်းက သချာင်္နည်းနဲ့ကြည့်ရင် ဇီးရိုး သုံည ဘာမှမရှိ... (၁၄ - ၂ - ၁၂ = ၀)
Post တင်သူတွေရော comment ပေးသူတွေရော မခေကြပါလား ဟရို့
13 February 2012 at 04:07
ဘယ်ခေမလဲ ညီတော်မောင် ဒီးဒိုးရယ်...တကယ့် ဂရိတ်မဟာ ဘလော့ဂါ ဘလော့ဂီကြီးတွေပဲ မဟုတ်လားး)
13 February 2012 at 04:41
မမက လက်ဆောင်မရရင် အကို့ကိုယ် ဟင်းကောင်းကောင်း မချက်ကျွေးပဲ နေမှာပေါ့လို့..:):)
13 February 2012 at 06:04
အဲ...ကျွန်တော့်ကိုလာပေးရင်တော့ ယူမယ်စရာ လက်ဆောင်ပြောပါတယ်း)း)
ခုတင် နဲ့ ခြင်ထောင် မှားတဲ့ ဆရာ့သူငယ်ချင်းကြောင့် ကျွန်တော်ဖြင့် မျက်ရည်တွေကျအောင်ကို ရယ်လိုက်ရတယ်။
ကဗျာထက် ပန်းဂေါ်ဖီကဗျာကို သဘောကျမိသွားရဲ့ဗျာ။
အစ်မ မမေဓာကတော့ တခါတည်းကို လှည့်ပြန်သွားမှာဘဲ ဟဲးးးးး။
ဆိုပေမဲ့ "0" ဆိုတာက
မြန်မာလို ဝလုံး ဆိုတာလေးကလည်း
jerry pigpig ကတော့
ဖုန်းကဒ် နှစ်ကဒ်စာ 51 မိနစ်တိတိ
ဘုကျတယ် သုံည ကြွင်းတယ်ဆိုလို့ မချောတို့က ဗယ်လင်တိုင်းဒေးကို ဝေးဝေးက ရှောင်ထားတာ
ဘူကျ မခံနိုင်လို့လေ..း)
မမေကဗျာလေးဖတ်ပြီး ဂေါ်ဖီပန်းကိုင်ပြီး ဒေါသကြီးနေတဲ့ ဦးဟန်ကြည်မဒမ်ကို မြင်ယောင်မိတယ် ဟိဟိ
ဂေါ်ဖီပန်းနဲ့ ထုတာ ခံရလို့ကတော့ ဦးဟန်ကြည်နဖူး ဘုထမှာ မြင်ယောင်သေး ဟေးဟေး
ရယ်စရာလေးတွေနဲ့ ဆရာဟန်ရဲ့ဆိုဒ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အလည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လွမ်းစရာ ကျောင်းသားဘ၀ နဲ့ ဗယ်လန်တိုင်း အကြောင်းလည်း ဖတ်သွားပါ သဗျား... :)
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ 'ဗယ်-လင်မှလည်း မတိုင်းချင်'ပို့စ်လေးမရပ်မနား ဖတ်သွားပါတယ်း))
သဘောအကျဆုံးကတော့ ခုတင်ရွှေနန်း ကဗျာလေးး)
ဆရာ့ ဗယ်လတိုင်းက ပိုအမှတ်တရဖြစ်တယ်..မမမေနဲ့ဆရာဟန် အပြန်အလှန် ကဗျာချိုးကြတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ..
တယ်လည်း ဆန်းကြယ်တဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းပါလား ဆြာကြည်.. :P.. ဆြာကြည်တို့များ.. အဲလောက်ကဲမှန်း ခုမှသိတယ်.. ဟဲဟဲဟဲ.. ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်း တစ်နှစ်နှစ်တော့ ဗယ်လင်တိုင်းမှာပါ.. ဟုတ်တယ်မလား... ရေးပါဦး. အဲဒီအကြောင်းတွေ.. :P
နောက်ဘက်ကပို့စ်တွေ အရင်ဖတ်လိုက်တော့ရှေ့က ပို့စ်မှာ ကဗျာတင်ထားတာမသိလိုက်ဘူး။ ဒီကဗျာကတော့ နောက်ထားပေမယ့် ကောင်းပါတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀ကတော့မမေ့နိုင်စရာချည်းပါပဲ။ သဘောကျလို့ရယ်မိပါတယ်။ ခုတော့ မူးဖို့မလိုတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ မိန်းမရယ်၊ တပည့်တွေရယ်နဲ့ နပန်းလုံးနေလို့လေ။ ကျွန်တော်တို့လည်း အရင်က ဘာရယ်မဟုတ် လိုက်ရူးခဲ့သေးတာ။ ခုတော့လည်း ကိုယ့်အိမ်ထောင်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ အာရုံသိပ်မလာတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကဗျာရေးပြီး ငြိမ်နေလိုက်တော့တာ။